Ndịàmà Jehova Nọ n’Afrịka
Siera Lion: Ebe a na-egosi Crystal ebe ndị ogbi bi
MBA OLE DỊ NA YA 58
MMADỤ OLE BI NA HA 1,109,511,431
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 1,538,897
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 4,089,110
Ọ Rịọrọ Chineke Ka O Mee Ka Ọ Hụ Ndị Ogbi
E nwere otu nwanna nwaanyị onye ozi ala ọzọ bi na Siera Lion. Aha ya bụ Crystal. Ọ na-eji asụsụ ndị ogbi ezi ndị ogbi ozi ọma. Otu ụbọchị ọ chọrọ ije ozi ọma, ọ rịọrọ Chineke ka o mee ka ọ hụ ndị ogbi ọ ga-ezi ozi ọma. N’ụtụtụ ụbọchị ahụ, mgbe ọ nọ na-aga nletaghachi, o si ụzọ ọ na-esitụbeghị mbụ. Ọ jụrụ ndị mmadụ ma ò nwere onye ogbi ha ma bi nso ebe ahụ. Ha gosiri ya otu ụlọ e nwere onye ogbi na ya. Mgbe o ruru, ọ hụrụ otu nwa agbọghọ onye ogbi ji ihu ọchị nabata ya nke ọma. Nwanna Nwaanyị Crystal ziri ya ozi ọma, ya egee ya ntị nke ọma ma kwuo na ya ga-achọ ịga ọmụmụ ihe a na-enwe n’asụsụ ndị ogbi. Ndị nọ ebe ahụ jụrụ Nwanna Nwaanyị Crystal ma ọ̀ ga-achọ ka ha gosi ya onye ogbi ọzọ. Ha gosiri ya onye ogbi ọzọ chọkwara ịmụ Baịbụl. Ọ bụ eziokwu na ọ gaala ozi ọma ebe ahụ ihe karịrị otu ugboro, ma ọ hụtụbeghị ndị ogbi abụọ ahụ ọ hụrụ n’ụtụtụ ahụ. O doro Nwanna Nwaanyị Crystal anya na ọ bụ Jehova mere ka ọ hụ ndị ogbi ahụ.
“Ọ Dị Ka Ọ̀ Bụ M Ka E Bu n’Obi Kwuo Okwu Ahụ”
Na Laịberịa, e nwere otu Nwanna aha ya bụ Emmanuel. Otu ụbọchị,ọ nya ụgbọala ya na-aga ọmụmụ ihe. Ka ọ nọ na-aga, ọ hụrụ otu nwoke jikere nke ọma ka ọ kwụ n’akụkụ ụzọ. Nwoke a yiri onye ike ụwa gwụrụ. N’ihi otú o si jikee nke ọma, Nwanna Emmanuel kwụsịrị ụgbọala ya ka ọ mara ihe mere ya. Ọ jụrụ ya aha ya, ya agwa ya na aha ya bụ Moses. N’abalị bọtara ụbọchị ahụ, ndị ohi zuru ego niile o nwere, ya ana-achọzi igbu onwe ya. Nwanna Emmanuel gere ya ntị nke ọma ma jiri obiọma gwa ya, sị: “Biko, soronụ m ka anyị gaa ọmụmụ ihe n’Ụlọ Nzukọ Alaeze.” O kwetara ma soro ya gaa. Ihe Moses nụrụ n’ọmụmụ ihe mere ka anya mmiri gbaa ya. Mgbe Moses gechara okwu ihu ọha e kwuru n’ọmụmụ ihe ahụ, o kwuru, sị: “Ọ dị ka ọ̀ bụ m ka e bu n’obi kwuo okwu ahụ. Ndịàmà Jehova, unu pụrụ iche.” Mgbe a gbasara, Moses kwetara ka a bịa mụwara ya Baịbụl. Kemgbe ahụ, ọ na-abịachikwa ọmụmụ ihe anya.
“Abụghị M Onye Ọgọ Mmụọ”
N’obodo Gini Bisaụ, e nwere otu nwata akwụkwọ dị afọ iri na ise aha ya bụ Aminata. Mgbe ọ dị afọ iri na atọ, otu onye nkụzi nke na-akụziri ha ise ihe, gwara ya na ụmụ klas ha ka ha see ihu ekpo na ihe ndị ọzọ e ji eme ememme obodo ha. Kama ise ihe ndị ahụ, Aminata sere ebe mara mma ụmụ anụmanụ na osisi juru na ya ma dee “Paradaịs” n’elu ya. Mgbe ha sechara, ha nyere ya onye nkụzi ha. Onye nkụzi ha gwara Aminata na ihe o sere abụghị ihe a sịrị ha see. Ọ kagburu ihe ahụ Aminata sere. Mgbe ha mụchara ihe, Aminata gakwuuru onye nkụzi ha ma jụọ ya, sị, “Ole ndị malitere ememme a?”
Ọ zara ya, sị: “Ndị ọgọ mmụọ.”
Gini-Bisaụ: Mgbe Aminata na-ese “Paradaịs”
Aminata gwara ya, sị: “Abụghị m onye ọgọ mmụọ. N’ihi ya, anaghị m eso eme ụdị ememme ndị a. Ekweere m na Chineke ga-eme ka ụwa ghọọ paradaịs n’oge na-adịghị anya. Ọ bụkwanụ ya ka m sere.” N’ihi ya, onye nkụzi ahụ kwuru na ọ ga-elegharị ule ahụ. Ọ sịrị na ya agaghịzi agwa ya see ihe, kama na ya ga-edere ya ajụjụ ndị ọ ga-aza. Mgbe Aminata legharịrị ule ahụ, ọ zatara ajụjụ iri na asatọ n’ime ajụjụ iri abụọ a jụrụ ya.
Ọtụtụ Ndị Bịara
Na Malawi, e nwere ndị nkwusa asaa nọ n’otu ìgwè dị n’ime ime obodo. Ha na-anọ n’otu ụlọ akịrịka amụ ihe. Ọbịbịa onye nlekọta sekit mere ka ha gbaa ezigbo mbọ gaa kpọọ ndị mmadụ ka ha bịa Ncheta Ọnwụ Jizọs. Mgbe a na-ekwu okwu Ncheta Ọnwụ Jizọs, ha konyere lampụ n’ebe niile n’ime ụlọ ahụ. Ebe ahụ juru eju ná mmadụ nke na efe adịghị ebe ahụ. Obi tọrọ ndị nkwusa asaa e nwere n’ìgwè ahụ ezigbo ụtọ mgbe ha hụrụ na otu narị mmadụ na iri abụọ bịara.
Malawi: Otu narị mmadụ na iri abụọ bịara Ncheta Ọnwụ Jizọs
Akwụkwọ Ahụ Nyeere Ya Aka n’Ezinụlọ
Akwụkwọ anyị a na-edosa n’ebe ndị na-ekwo ekwo na-aba uru. Ma mgbe ụfọdụ, anaghị ahụcha uru ọ na-aba ozugbo. Na Lomé, bụ́ isi obodo Togo, otu nwaanyị ji obi abụọ bịa ebe anyị dosara akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị ma were akwụkwọ anyị aha ya bụ Unu Ga-enweli Obi Ụtọ n’Ezinụlọ Unu. Ya na ụmụnna nọ ebe ahụ kwurịtara ihe dị ná Ndị Efesọs 5:3 ná nkenke. Nwaanyị ahụ nyere ha nọmba ekwentị ya, ha enyekwa ya nke ha. Mgbe izu abụọ gachara, nwaanyị ahụ kpọrọ ụmụnna ahụ n’ekwentị. Ọ gwara ha, sị: “Anaghị m achọ iji anya ahụ Ndịàmà Jehova. Ma, m gụrụ akwụkwọ ahụ. Ọ mara ezigbo mma. O nyerela m aka idozi nsogbu ụfọdụ anyị nwere n’ezinụlọ anyị. Ejirikwala m ya nyere di na nwunye abụọ ọzọ aka. Otú m sibu ele Ndịàmà Jehova anya adịghị mma. Biko, bịanụ mụwara m Baịbụl.” A malitere ịmụrụ nwaanyị a Baịbụl, malitekwa ịmụrụ otu n’ime di na nwunye ahụ o nyeere aka, Baịbụl.
Ọ Sụgharịrị Broshọ Anyị
E nwere otu obere obodo dị na Gana aha ya bụ Ankasie. N’obodo a, ụfọdụ ndị ahịa na-akpọsa ngwá ahịa ha n’otu okporo ụzọ na-ekwo ekwo e nwere ebe ahụ. N’ụbọchị Mọnde ọ bụla, ụmụnna anyị na-edosa akwụkwọ anyị n’ihe a na-akwagharị akwagharị n’ebe ahụ. E nwere otu nwoke aha ya bụ Enoch bịara ebe ahụ iwere akwụkwọ, otu nwanna aha ya bụ Samuel ezie ya ozi ọma. O nyekwara ya broshọ Gee Chineke Ntị, ya anara ya. Ma, nwoke ahụ jụrụ ya ma ò nwere akwụkwọ ọ bụla ha nwere e dere n’asụsụ Kusaal.
Gana: Ọ sụgharịrị broshọ anyị n’asụsụ Kusaal
Samuel sịrị ya: “Ewela iwe, anyị enweghị. Ma, anyị nwere nke e dere n’asụsụ Frafra.” Asụsụ a na asụsụ Kusaal yiri. Mgbe Enoch chọrọ ịga ụlọ ha dị n’ebe ugwu obodo ahụ, ọ bịara gwa ụmụnna ahụ ka ha nye ya akwụkwọ ọ ga-enye ndị ikwu ya.
Mgbe o mechara lọta Ankasie, o nyere Samuel otu akwụkwọ. Enoch asụgharịala broshọ Gee Chineke Ntị n’asụsụ Kusaal. Kemgbe ahụ, ọ na-agachi ọmụmụ ihe anya. Ya na Ndịàmà Jehova na-amụchikwa Baịbụl anya.